ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): Women sending panties to Myanmar embassies in protest
Posted by LIN LET KYAL SIN at 2:54 AM
ကျွန်တော်လည်း မလင်းလက်ကြယ်စင်ပြောတဲ့ Related Link မှာသွားဖတ်ကြည့်တော့ စိတ်ထဲမှာ ကသိကအောက်ဖြစ်သွားတယ်. ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင် အဲဒီလို စည်းစနစ်မမှန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ တုံ့ ပြန်တိုက်ခိုက်တာကို အားမပေးချင်ဘူး. ဒါမျိုးက အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့ အပြင် တကယ်တမ်း အသက်၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်တကွ အစစအရာကိုယ်ကျိုး စွန့် လွှတ်စတေးပြီး တိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေသူတွေ အပေါ်မှာပါ အရိပ်မည်းထင်ဟပ်စေပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်သာမက ကမ္ဘာတ၀န်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စက်ဆုပ် ရွှံရှာမုန်းတီးနေမှာ မလွှဲမသွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမကျေနပ်တွေကို ဘယ်လိုထုတ်ဖော်မလဲဆိုတာကိုသာ အရင်သုံးသပ်ပါ။ ပြီးမှ စည်းစနစ်တကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း ထိရောက်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားရမှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ယခု တော်လှန်ရေးဟာ မအောင်မြင်သေးမယ့် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး အကျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလုပ်မယ့်အစား တကယ်ထိရောက်စေနိုင်တဲ့ ဆောင်ရွှက်ချက်တွေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကိုသာ တစိုက်မက်မက် လျှောက်လှမ်းသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အန်တီလဲ လင်းလက်နဲ့ သဘောထားချင်းတူပါတယ်။ ကိုယ်တို့က ဆန့်ကျင်တယ် ဆိုတာတောင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဆန့်ကျင်ပြချင်တာ။ သူတို့ရိုင်းသလို တို့လိုက်ရိုင်းလို့ မဖြစ်ဘူး။
ဆိုးပါတယ်ဗျာ... ဒီလို အကြံပဲ ထွက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆို ကျနော်တို့က ဘာလို့ ပါလီမန်မှာ ထိုင်ခုံ ၃၀% ပေးတော့မလဲ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ဦးနှောက်ဟာ ဒါ့ထက်တော့ ပိုစဉ်းစားတတ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်လဲ မလင်းလက် ခံစားရတာမျိုးကို သဘောတူပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ဆုတောင်းပေးတယ်
ဒါလဲ ကျွန်မ အမြင်နော်.........
I ABSOLUTELY AGREE WITH YOU.AS YOUR THOUGHTS FOLLOW DAMA, SHAME TO BE DONE BAD THINGS AND FEAR FORM DOING BAD THINGS.AND SO FIRST, I WANA CONGRADULATE YOU AND RESPECT YOUR INTELLIGENCE AS OF YOUR AGE.SECOND,IT'S WHAT ALL MYANMAR GIRLS SHOULD HAVE THAT KIND OF KNOWLEDGE AND CONSCIUOSNESS LIKE THIS IMPORTANT MOMENT.
လင်းရေ.. အန်တီကကျတော့ ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့.. သမိုင်းကြောင်းတခုမှာ မတရားအစိုးရအပေါ် လူတွေက နည်းမျိုးစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဥပမာ ဖြေဖ၀ါးမှာ သူတို့ ပုံတွေကပ်တာမျိုး၊ ယတာချေတာမျိုးတွေရောပေါ့။ အဲလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။
ညီမလေးရေ လာဖတ်သွားရင်း အတွေးတူပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်မရေးဖြစ်တာကို (မရေးတတ်တာပဲဆိုဆို) ကြိုက်လို့ မသွားပါရစေနော်
It is ugly from the view of Burmese and Buddhist communities, and I don't believe most (if not none) Burmese lady will do that. But women are viewed differently in other countries, so they're just protesting in their own way.
မမလဲ ညီမလေးပြောတာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ်၊ ကိုယ်တောင် ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာတောင် စိတ်ထဲမှာ ဟင် ဆိုပြီ ဖြစ်သွားသေးတာ၊ သူများယုတ်ညံ့တိုင်း ကိုယ်လိုက် ယုတ်ညံ့ရင် ကိုယ်ပါ အဲဒီအတန်းအစားထဲ က ဖြစ်သွားမှာပေါ့၊ ဒါကြောင့် ညီမလေးရဲ့ သဘောထားကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်
wet fire said...
people have to be creative even in protesting. To get media attention, to exite protesters and to be effective at the same time,aprotest needs kind of creative action. well, it's boring to protest at embassy with the same shouting again and again. now people have reasons to protest. they want it known worldwide so the whole world would hear them and their statements.
please don't be too sensitive too much. just send one yourself.
and give advice how best to protest the next time. just be creative.